'एमालेले मात्रै देश बनाउन र बचाउन सक्छ'
तारा सुब्बा, मेयर उमेदवार (नेकपा एमाले) धरान उपमहानगरपालिका
२०७४ असार १० शनिबार १५:१०:००
सुनसरीको धरान उपमहानरपालिकालाई पनि यति बेला चुनावको चटारोले भ्याइनभ्याइ । रोपाइँको असार भन्दा पनि निर्वाचनको असारमा होमिएको धरानमा पनि अन्य नगरमा जस्तै तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । एकले अर्को दलको आलोचना गर्दै चुनावी प्रचारमा दलका तर्फबाट मेयरका उमेदवारहरु मतदाताको घरदैलोमा छन् । यसै क्रममा एमालेले तारा सुब्बालाई मेयरको उमेदवारका रुपमा अगाडि सारेको छ । सुब्बाले चुनाव जित्ने आधार के हो ? उनका चुनावी एजेण्डा तथा धरानका समस्या र समाधानका लागि उनले अगाडि सारेका समाधानका योजनाबारे केन्द्रित रहेर सुब्बासँग बाह्रखरीका लागि नरेश फुयाँल र नवराज विष्टले गरेको कुराकानीः
२० वर्ष पछि स्थानीय निकाय (तह) को निर्वाचन भइरहेको छ । निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह कस्तो छ ?
स्थानीय तहको निर्वाचन त नेपालको इतिहासमै पहिलो भएकाले जनता उत्साहित छन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउन जनता आतुर छन् । जनताले जनप्रतिनिधिबाट मात्रै आफ्नो गाउँठाउँको विकास हुन्छ भन्ने आशा पनि गरेका छन् ।
नेकपा एमालेप्रति जनताको उत्साह कस्तो रहेछ ?
एमालेले खेलेको भूमिका, बनाएको योजना र एमालेले गरेको मुलुकको विकाकासका कारण एमालेले मात्रै देश बचाउन र बनाउन सक्छ भन्ने जनतामा भरोसा छ । त्यसैले हाम्रा नेता कार्यकर्ता तथा मतदाता निर्वाचनमा होमिएका छन् ।
के कारणले यत्रो भरोषा एमालेप्रति ?
सबैका आआफ्नै एजेण्डा छन् । कति मिल्छन् पनि होला । यो निर्वाचन अधिकार सम्पन्न निर्वाचन हो । जनताको इच्छा अनुसार संघीयता र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएका छौं । यसका लागि हामीले गर्दै आएको काम, धरानको विकासका लागि बनाएको खाका, स्थानीय निकायमा हाम्रो नेतृत्व हुँदा सुरु गरेका कामलाई मुर्तरुप दिनुपर्ने भएकाले पनि हामीलाई मतदाताले विश्वास गर्ने वातावरण बनेको हो ।
धरान र सुनसरीको नेतृत्व लगातार एमालेले गर्दै आएको छ । यहाँका समास्या के हुन् र त्यसको समाधानका उपाय एमाले सँग के छ ?
प्रजातन्त्रपछि हामीले ४८ सालको निर्वाचनमा मनमोहन अधिकारीलाई यहीँबाट जिताएका हौं । एवम प्रकारले हामीले यहाँ जितेका छौं । समस्या धेरै छन् । धेरै समस्याको समाधान पनि गरेका छौं । तर सीमित स्रोत र साधनका कारण भनेजस्तो विकास भने गर्न सकेनौं ।
पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री धरानबाटै निर्वाचित हुनुभयो । भलै यहाँबाट जितेको बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएन । तर, यहाँबाट जितेर गएको एमाले नेतृत्वले धरानलाई न्याय गरेन भन्ने गुनासो छ नि जनतामा ?
०४८ सालमा मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनु भएको हैन । तर जनताले जुन अपेक्षा गर्नु भएको छ त्यो कसैले पनि पुरा गर्न सक्दैन ।
भनेपछि जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भन्दा पनि जनताको महत्वाकांक्षा बढी भएको हो ?
जनताको महत्वाकांक्षा एकैपटक धेरै भएको हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ होला । कसैले पनि एकैपटक जनताले भनेजति काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन । विकास भनेको चरणबद्ध हुँदै जाने हो । यो निरन्तरको अविराम प्रक्रियो हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
धरानको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जनताको ४० प्रतिशत लगानी रहेछ नि ?
जनताको जनसहभागितामा आधारित भएर ६०/४० को अवधारणमा विकास चलचिरहेको छ । यो जनता आफैंले गरेको भन्दा पनि यो सोच र भिजन एमालेले ल्याएको हो । जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेर लागु भएको हो ।
यहाँका जनताले लामो समयदेखिको माग एयरपोर्ट निर्माण र खाने पानिको रहेछ । एमालेको पहुँच केन्द्रमा हुँदा र स्थानीय तहमा आफ्नै नेतृत्व हुँदा पनि काम गरेन भन्ने असन्तुष्टि रहेछ नि जनतामा ?
यो भ्रम मात्रै हो । धरानाको खाने पनि समस्याको समाधानका लागि एमालेजति अरु पार्टी लागेका छैनन् । एमालेको पहिलो नम्बरको कार्यसूची नै खाने पानी समस्याको समाधान हो । राजनीतिक संयन्त्रमार्फत हामीले यो काम गरेका हौं । यसको नेतृत्व एमालेले गरको छ । अहिले निर्वाचनको बेलामा अरु दलले मैले काम गरेको भनेर भन्दैछन् भने त्यो झुट हो । नेपाली कांग्रेसले खानेपानीको आयोजनाको सन्दर्भमा नगरकमिटीले अघिल्लो दिन फैसला गर्यो भोलीपल्ट क्षेत्रीय कमिटीले विरोध गरेको दस्तावेज सांक्षी छ । माओवादीको कुरा पनि यही हो । आज उहाँहरु नै ठूलठूलो गर्दै हिँड्नु भएको छ ।
एयरपोर्टको कुरामा पनि उहाँहरुले गरेको दाबी झुटा कुरा हो । एयरपोर्ट मैले ल्याएको भनेर उहाँहरु भनिरहनु भएको छ । त्यो कसैले ल्याएको होइन आवश्यकताले जन्माएको हो । धरानका लागि एयरपोर्ट आवश्यक भयो । तत्कालीन नगरप्रमुखको हैसियतले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा काम सुरु भएको हो । अब भन्नुस कसले ल्यायो एयरपोर्ट ?
अवधारणा आयो तर यसका लागि आवश्यक पहल गरिएन कि सुनुवाई नभएको हो ?
स्थानीय क्षेत्रबाट पर्याप्त पहल भएको छ । निर्माण प्रक्रिया नै गञ्जागोल छ इमान्दार भएर भन्ने हो भने । यो सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । यसको सुरुआत यति एयरकर्पोरेट कम्पनीले निजी एयरपोर्ट बनाउने भनेर ७ बिघा जमिन किने देखि सुरुआत भएको छ । तर, पछि यसलाई ठूलो एयरपोर्ट बनाउने भनेर नागरिक उड्डय प्राधिकरणमा छलफल गरेर अगाडि बढाउने काम भएको हो । प्राधिकरणले धरान उपमहानरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराए मात्रै यसको काम सुरु हुन्छ भनेर पत्र पठायो । त्यसपछि हामीले उसले भनेजति सार्वजनिक जग्गा सर्बदलीय बैठकमार्फत निर्णय गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका छौं । वातावरणीय मूल्यांकन गर्ने काम भएको छ । अहिलेसम्म भएको काम यति मात्रै हो ।
प्रादेशीक राजधानी धरानलाई बनाउने भनेर प्रतिस्पर्धी दलहरुले भोट मागिरहेका छन् । यो आश्वासन तपाइँले मतदातालाई दिइरहनु भएको छ कि हैन ?
मिडियामा कति कुरा झुटो बोलेर पनि जाने गरेका छन् साथीहरु तर म त्यसो गर्दिन । सम्भवभएसम्म प्रदेशको राजधानी धरानमा बनाउन म पनि पहल गर्नेछु, म यती मात्रै भन्छु ।
यसको मतलब सम्भावना कम छ भन्ने हो ?
नगरप्रमुखको उमेदवारले प्रदेशको राजधानी ग्यारेन्टीका साथ ल्याउँछु भन्ने हैसियत राख्दैन नि । तर, यदी मैले भोली निर्वाचन जितेँ भने म प्रयास गर्छु ।
मतदाताका घरमा पुग्दा मुख्य प्रतिस्पर्धी कुन दल पाउनुभयो ?
हिजो पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धी कांग्रेस थियो । आज पनि कांग्रेस नै हो ।
एमालेले धरानमा चुनाव जित्ने आधार के हो ?
जनताको भरोषा नै हो । हामीले हिजो नेतृत्वमा रहँदा गरेका काम, हामीले यहाँका समस्या समाधान गर्न समस्याको सूचीकृत गरेका छौं । धरानलाई हामीले सांस्कृतिक शहर बनाउने, शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्र बनाउने भनेका छौं । खानेपानी समस्याको समाधान, बसपार्क निर्माण, सभागृहको विकास गर्ने, धरानको वैज्ञानिक नापी गर्ने र ४०/६० को अवधारणमा अनुसार बनेको सडकको धनीपूर्जाको लगत कट्टा भएको छैन । जसका कारण सडकको पनि घरधनीले कर तिर्नुपरिरहेको छ । त्यसैले यसको अन्त्य गर्न चहान्छौं । सार्वजनिक जमिन नापी गरेर आवश्ककता अनुसार सार्वजनिकस्थल बनाउने योजना अघि सारेका छौं ।
धरानको निर्णायक भोट सुकुम्बासी मतदातालाई लिइएको पाइयो । एमालेले कत्तिको रिझाएको छ सुकुम्बासीलाई ?
सुकुम्बासीको समस्यालाई हामीले नजिकबाट नियालेकाले उहाँहरुमा हाम्रो पक्कड राम्रो छ । उहाँहरुको समस्या समाधानका लागि योजना पनि बनाएका छौं । धरानलाई सुकुम्बासी मुक्त क्षेत्र बनाउने, उनीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउने सोचका छौं । धनीपूर्जा वितरण गर्दैछौं ।
यो एजेण्डा त माओवादीले द्वन्द्वकालमा उठाएको थियो । तर अझै उसले गर्न सकेको छैन । तपाइँँले भनेजस्तो सहजै यो काम गर्न सकिन्छ ?
चुनौती छ । तर त्यही चुनौतीका बाबजुद हामी काम गर्नेछौं ।
सुकुम्बासीमा हाम्रो राम्रो उपस्थिति रहेको माओवादी केन्द्रले दाबी गर्दै आएको छ नि ?
त्यस्तो देखिदैन । के आधारमा मओवादीलाई सुकुम्बासीले विश्वास गर्ने ? बोलेर मात्रै हुँदैन । आधार चाहिन्छ । एमालेले त बोलेको काम गर्छ । ०५१ सालमा ६५ हजार सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा वितरण गरेको छ । एमालेले सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । त्यही कार्ययोजना अनुसार हामीले काम गर्न सक्यौं भने हामी सुकुम्बासी बस्तिलाई नमुना बस्तीका रुपमा रुपान्तरण गर्नेछौं ।
मतदातालाई के भन्न चहानुहुन्छ ?
स्थानीय सरकार निर्माण गर्नका लागि हामीलाई मत दिनुस् । धरानको विकास र समृद्धिका लागि सबै मिलेर अगाडि बढौं । हाम्रो सुन्दर धरानका लागि आफूलाई क्रमिक रुपले सुधारु गर्दै जाउँ भन्ने मेरो अपिल छ ।
राजपाले चुनाव बहिष्कार गर्नुलाई मेयरको उमेदवारको नाताले कसरी लिनुभएको छ ?
राजपाले किन चुनाव बहिष्कार गर्यो बुझी नसक्नुछ । जनता चुनाव चहान्छन् । जनता घरआगनमा विकास भएको हेर्न चाहन्छन् । वास्तविक नजरमा तराईका जनता आफ्नो ठाउँमा निर्वाचन भएको देख्न चहान्छ । आफ्नो जनप्रतिनिध आएको जनता देख्न चहान्छ । तर कुन स्वार्थले हो राजपाको माथिल्लो तहमा नेताले चुनाव बहिष्कार गरे । त्यसको प्रत्यक्ष असर २ नम्बर प्रदेशका जनतालाई परेको छ ।